Shanghai TAOLE Machinery CO., LTD ari kutungamirira basa Manufacturer, nokutengesa uye ekisipota ane zvakasiyana-siyana weld kugadzirira michina akafanana ndiro Bevelling Machine, Pipe Bevelling Machine, Pipe Cutting uye Bevelling Machine nezvimwewo , kuti zvinonzi nevakawanda kushandiswa Steel Construction, Shipbuilding, Aerospace, Pressure mudziyo, Petrochemical, Oil & Gas uye zvose Welding mumaindasitiri mukugadzira. Kuva "GIRET" uye "TAOLE" pezvitsiga zviviri musika dzakawanda pamwe mureza uye customized michina sezvo paminiti zvinodiwa .. We Export zvigadzirwa yedu anopfuura 50 misika kusanganisira Australia, Russia, Asia, New Zealand, Europe musika, etc. Sezvo pakururamisa zvakanaka nevasori uye makambani ari munyika yose, We zvipo huru kunatsiridza Kushanda pamusoro beveling uye azvikuya nokuda weld kugadzirira.
Somunhu nyanzvi gadzira muna China, Tinonzwa vanodada kuti credentialed pamwe ISO 9001: 2008, CE Certificate uye Alappuzha advertising, inova uchapupu sei zvakanaka tinobudisa yedu machines.With kugadzirwa chikwata, budiriro chikwata, kutumirwa chikwata, kutengesa uye aftersales chikwata basa vatengi rubatsiro.
Michina edu zvakanaka nomufaro mukuru nomukurumbira zvose mumhuri uye mhiri kwemakungwa misika sezvo tiri kushanda indasitiri ino kubva 2009. With makore anopfuura 10 'experiance, injiniya chikwata chedu kuramba kukura uye updating muchina kwakavakirwa simba rokuponesa, mukuru kushanda, safty chinangwa kubvira pazera rokutanga kusvikira zvino kwakabuda chizvarwa. With siyana muchina muenzaniso vatengi 'Ipfungwa anogona zvinenge kusangana ose beveling kukumbira Welding indasitiri dzakakwirira unongotaura.
Basa redu "UNHU, SERVICE uye kuzvipira" . Kupa mushonga kuti mutengi pamwe yepamusoro uye basa guru.